Qurxummiin kun “Saw-fish” jedhama. Qajeelatti yoo gara afaan Oromootti hiiknu “Qurxummii Magaazii” jechuudha. Maal jechuudha? Gaafii jettu gaafachuun keessan hin oolu. Anis haga danda’een deebii isinii kennaa na faana bu’aa. Uumamni kun bishaan keessa akka jiraatu maqama isaa irraa hubatuu dandeenna. Garuu maqaa “magaazii” jedhu maaliif itti dabalan laata?
Qurxummiin kun inni xiqqaan Meetira 5 caalaa dheerata. ilkaan magaazii kanaan waan barbaade cicciree nyaataa. qurxummiin kun avareejiidhaan haga waggaa 25 fi soddomaa jiraatuu danda’a. Ilkaan tokko magaazii kanarra jiru yoo jalaa cabe, kan birootu biqilaaf. Wanti beekamuu qabu garuu, qurxummiin kun ilkaan magaazii kana malee ilkaan dhugaa kan biraa afaan keessaa qaba. Inni alaan argamu kun waa ittiin muruufii ajjeesuudhaaf kan itti fayyadamu yoo ta’u, inni keessatti argamu ammoo nyaata san bulleessuudhaaf tajaajila.
May 20, 2022 sa;aa 5:51 pm Update tahe